July 2020 - Page2of 12 - Tameelay
July 25, 2020 daddy Comments Off on ဒေါသဖြေနည်း ၁၁-နည်း
ဝိသုဒ္ဓိမဂ်မှာ ….ဒေါသဝင်လာရင် ဖြေဖျောက်နည်း၁၁-နည်းကို ပေးထားပါတယ်။ ၁၊ မေတ္တာပွား၍ ဖျောက်ခြင်း၊ ၂၊ မြတ်စွာဘုရား၏ အဆုံးအမသြဝါဒကိုဆင်ခြင်၍ ဖျောက်ခြင်း၊ ၃၊ ရန်သူ၏ ကောင်းကွက်ကို ရှာ၍ ဖျောက်ခြင်း၊ ၄၊ သနား၍ ဖျောက်ခြင်း၊ ၅၊ မိမိကိုယ်ကို ဆုံးမ၍ ဖျောက်ခြင်း၊ ၆၊ ကမ္မဿကတာဉာဏ်ဖြင့် ဖျောက်ခြင်း၊ ၇၊ သည်းခံပုံ ဇာတ်တော်လာ နည်းများဖြင့်ဖျောက်ခြင်း၊ ၈၊ သံသရာတစ်လျှောက်၌ဆွေမျိုးမတော်ခဲ့သူမရှိဟု ဆင်ခြင်၍ ဖျောက်ခြင်း၊ ၉၊ […]
July 25, 2020 daddy Comments Off on ဒုက္ခတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါ ဒါလေး စမ်းလုပ်ကြည့်ပါ
ဒုက္ခတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါ ဒါလေး စမ်းလုပ်ကြည့်ပါ အကယ်၍ သင်ဟာ စီးပွားရေး လူမှုရေး ကျန်းမာရေး အဘက်ဘက်မှာ ချို့ယွင်းလာနေပြီလား။ အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲဖြစ်နေလား သေချင်လောက်အောင် စိတ်ဓာတ်ကျနေလား ဘဝမှာ အခက်အခဲ မျိုးစုံ ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့နေရပြီလား စိတ်မပူပါနဲ့ မဟာသမယသုတ် ပရိတ်တော်မြတ်ကြီးကိုသာ ယုံကြည်လေးနက်စွာ ပူဇော် လိုက်ပါ။ မဟာသမယသုတ် ပရိတ်တော်မြတ်ကြီးကိုစ ပူဇော်ကာစမှာ အလွတ်ရစရာမလိုပါဘူး စာအုပ်ကို ကြည့်ပြီး ပူဇော်တတ်ရင်ပဲ ရနေပါပြီ စပြီး […]
July 25, 2020 daddy Comments Off on သစ်တံခါး ဆရာတော် ဘုရားကြီးမှ မျှဝေတဲ့ ပုတီး အဓိဋ္ဌာန် ပါ
သစ်တံခါး ဆရာတော် ဘုရားကြီးမှ မျှဝေတဲ့ ပုတီး အဓိဋ္ဌာန် ပါ အရဟံ သိဒ္ဓိ ဘဂဝါ အောင် သစ်တံခါး ဆရာတော် ဘုရားကြီးမှ မျှဝေတဲ့ ပုတီး အဓိဋ္ဌာန် ပါ အရဟံ …. လူမင်းနတ်မင်း ဗြဟ္မာ မင်း တို့ ၏ ဝပ်စင်းကော်ရော် ပူဇော် ထူးခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား သိဒ္ဓိ…… မိမိ ဖြစ်ချင်တာ အောင် မြင်ချင်တာ ကိစ္စ […]
July 25, 2020 daddy Comments Off on လူတစ်သိန်းကိုကျွေးရတာနဲ့ ညီမျှသည့် ကုသိုလ်ရတဲ့ ဘုရားရှိခိုးနည်း
ဘုရားရှိခိုးနည်း တစ်ကြိမ် ဘုရားရှိခိုးလို့ရှိရင် လူတစ်သိန် းကျွေးရတာနဲ့ ညီမျှတဲ့ ကုသိုလ်ရတဲ့ ဘုရားရှိခိုးနည်းရှိတယ်။ ဘယ်လို ဘုရားရှိခိုးမလဲဆိုတော့…. မမြဲသော ဤခန္ဓာကိုယ်ကို ကိလေသာ အပူခပ်သိမ်းမှ ကင်းငြိမ်းတော် မူပြီးသော ဘုရား တရား သံဃာအား လှူဒါန်းပါ၏ ဘုရား…(တစ်ကြိမ် ရှိခိုးလိုက်)၊ ဆင်းရဲသော ဤခန္ဓာကိုယ်ကို ကိလေသာ အပူခပ်သိမ်းမှ ကင်းငြိမ်းတော် မူပြီးသော ဘုရား တရား သံဃာအား လှူဒါန်းပါ၏ဘုရား…(တစ်ကြိမ် ရှိခိုးလိုက်)၊ အစိုးမရသော ဤခန္ဓာကိုယ်ကို […]
July 24, 2020 daddy Comments Off on အချစ်ရေး အဆင်ပြေစေမယ့် ယတြာနည်းလေး
အချစ်ရေး အဆင်မပြေဘူးဆို မကြာခဏ လုပ်ကြည့်ပါ။ ထူးခြားလာပါလိမ့်မယ်။ တနင်္လာနံ သတ္တဝါလေးတွေကို အာဟာရဒါနပြုပါ။ ဌက်ကလေးတွေ၊ ခိုလေးတွေ ၊ငါးလေးတွေ ၊လမ်းဘေး ခွေးလေခွေးလွင့်လေးတွေကို အစာကျွေးပါ။ ကျွေးရမဲ့နေ့ကတော့ အင်္ဂါနေ့ သောကြာနေ့ စနေနေ့လေးတွေမှာကျွေးပေးပါ။စိတ်ထဲဘာမှဆုမတောင်းပါနဲ့။ သဒါ္ဓတရားထက်သန်စွာကျွေးရင်ရပါပြီ။ ရွေးပေးထားတဲ့နေ့တိုင်း မပျက်မကွက်ကျွေးရမည်ဟု မဆိုလိုပါ။ မိမိအားတဲ့နေ့မှကျွေးဖို့ပါပဲ။ အထက်ပါအစီအရင်တွေကို လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ချစ်သူနဲ့အဆင်မပြေတဲ့သူတိုင်း အဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်။ အဆင်ပြေနေတဲ့သူတွေက ချစ်ခြင်းတွေခိုင်မြဲမယ်။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးအချစ်တွေ ဆထက်ပွားလာပါလိမ့်မယ်။ဒါ့အပြင် ငွေကြေးတွေပါ လာဘ်ရွှင်လာတာကို ထူးထူးခြားခြားတွေ့ရပါလိမ့်မည်။ မနောမယဓါတ်နန်း […]
July 24, 2020 daddy Comments Off on ကိုယ်ချင်းစာ ကြည့်လိုက် ပါ.. အနိုင် မယူပါနဲ့
ခဏခဏ သည်းခံ ရတာ များလာတဲ့ လူတစ်ယောက် ဟာ ကိုယ်နဲ့ ဘယ် အတိုင်း အတာ ထိပဲ ပတ်သတ် ပတ်သတ် ခံနိုင် ရည် စွမ်း ကုန်လွန် တဲ့ တနေ့တော့ လုံးဝ အဆက် သွယ် ပြတ်တောက် မသွား ရင်တောင် ဆက်ဆံရေး တွေက အေးစက် လာ လိမ့်မယ် ။ ။ ။ ဒါဟာ သူ […]
July 24, 2020 daddy Comments Off on နေ့စဉ်ဘဝလေးမှာ၊ဘဝနဲ့စိတ်ခဏတာအေးချမ်းရဖို့ဆိုရင်
နေ့စဉ်ဘဝလေးမှာ၊ဘဝနဲ့စိတ်ခဏတာအေးချမ်းရဖို့ဆိုရင် ကိုယ့်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့နေပါ၊သူ့အကုသိုလ်စိတ်နဲ့မနေပါနဲ့။ သူများမကောင်းလို့ကိုယ်လည်းမကောင်းနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဒေါသစိတ်ကို မမွေးပါနဲ့။ သူမကောင်းတာ သူ့သရာ၊ကိုယ်ကောင်းတာ ကိုယ့်သံသရာ။ နောက်ဆုံးမှာ ချစ်သည်ဖြစ်စေ၊မုန်းသည်ဖြစ်စေ၊ ကောင်းသူကကောင်းတဲ့သံသရာ ရောက်မယ်၊မကောင်းတဲ့သူက မကောင်းတဲ့သံသရာကို ရောက်မယ်။ ကောင်းတဲ့သံသရာနဲ့မကောင်းတဲ့သံသရာ နှစ်ခုလုံးကို မရောက်ချင်ဘူးဆိုရင်၊အမုန်းကိုလည်း ဖြတ်၊ အချစ်ကိုလည်းဖြတ်၊ဘယ်မှာ တွယ်ကပ်မနေဘဲ၊ မြင်မြင်သမျှတစ်ခဏ၊ဖြစ်ပျက်မျှသာ ရှိနေတယ်လို့မြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားရပါမည်။ မေတ္တာဖြင့် အရှင်ဇနက(မန္တလေးစာသင်သား) ေန႔စဥ္ဘဝေလးမွာ၊ဘဝနဲ႔စိတ္ခဏတာေအးခ်မ္းရဖို႔ဆိုရင္ ကိုယ့္ကုသိုလ္စိတ္နဲ႔ေနပါ၊သူ႔အကုသိုလ္စိတ္နဲ႔မေနပါနဲ႔။ သူမ်ားမေကာင္းလို႔ကိုယ္လည္းမေကာင္းႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ေဒါသစိတ္ကို မေမြးပါနဲ႔။ သူမေကာင္းတာ သူ႔သရာ၊ကိုယ္ေကာင္းတာ ကိုယ့္သံသရာ။ ေနာက္ဆုံးမွာ ခ်စ္သည္ျဖစ္ေစ၊မုန္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းသူကေကာင္းတဲ့သံသရာ ေရာက္မယ္၊မေကာင္းတဲ့သူက မေကာင္းတဲ့သံသရာကို […]
July 24, 2020 daddy Comments Off on အိမ်ထောင်ဘက်ရွေးတဲ့အခါ နေ့နံမတူလို့ စိတ်ညစ်နေသူများ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ
ကျနော် ငယ်ငယ်တုန်းက တက်ခဲ့တဲ့ အလယ်တန်း ကျောင်းရဲ့ ဘေးမှာ အစိုးရ သစ်စက်ဝင်းကြီး ရှိတယ်။ သစ်စက်ဝင်းရဲ့ အနောက်ထဲမှာ ဝန်ထမ်း တန်းလျားကြီး ရှိတယ်။ အဲဒီ ဝန်ထမ်း တန်းလျားမှာ ကျောင်းက သူငယ်ချင်းတွေ ရှိကြတော့ မကြာခဏ ရောက်ဖြစ်တယ်။ သစ်စက်ဝင်း ဝင်ပေါက်က လူတကာ ပေးမဝင်ဘူး။ အဲဒီတော့ တန်းလျားထဲကို သွားချင်ရင် ရထားလမ်းဘေး လူသွားလမ်းကနေ သွားရတယ်။ ရထားလမ်း ဆိုတဲ့အတိုင်း ကျူးကျော်တဲတွေ […]
July 24, 2020 daddy Comments Off on ခြေညှိုးက ခြေမထက် ရှည်နေတဲ့သူဆို ဒါကိုဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ကြည့်ပါ
ခြေညှိုးက ခြေမထက် ရှည်နေတဲ့သူဆို ဒါကိုဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ကြည့်ပါ ခြေညှိုးက ခြေမထက်ရှည်နေတဲ့ သူဟာ … အချစ်ကြီးတယ် အစွဲအလမ်းကြီး ခံစားလွယ်တယ်။ အငြိုးကြီးတယ် ရန်ငြိုးထားတတ်တယ်။ လူချစ်လူခင်ပေါသလို မနာလိုသူလည်း ပေါများတယ် ရည်ရွယ်ချက်ကြီးတယ် လုပ်ချင်တာကို ကြိုးစားလုပ်တတ်တယ်။ ပေးကမ်းလိုစိတ်ရှိတယ်။ မရှိ ရှိတာ လှူ ဒါန်းတတ်တယ်။ ချစ်သူကိုဦးစားပေးတယ် ချစ်သူကိုလည်း အနိူင်ယူတယ်။ ချစ်ပြီဆို ဘယ်လိုတားတား ဇွတ်ချစ်တယ် မုန်းပြီးဆို လုံးဝလှည့်မကြည့်ဘူး။ စကားပြောတည်တယ် ခင်သွားရင် ပေါတောတောလုပ်တတ်တယ်။ […]
July 24, 2020 daddy Comments Off on စနေသားသမီးတွေဟာ ဒီလိုလေးတွေပါ
စနေသားသမီးတွေဟာ ဒီလိုလေးတွေပါ နောက်ဆုံးမွေးနံဖြစ်ပေမယ့် အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ အများတကာထက်ရှေ့ဆုံးကနေ ဦးစီးဦးဆောင် ပြုရမှ ကျေနပ်သူတွေ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတယ်စိတ်ထဲရှိတာကို ရှိတဲ့အတိုင်း ခပ်ရှင်းရှင်းပြောတတ်ကြလို့မကြာခန ပြသနာ ဖြစ်တတ်ကြသူတွေ သူတို့ရဲ့ စိတ်ကို မျက်နှာမှာ အကဲခက်လို့မရအောင်ဟန်ဆောင်ကောင်းလွန်းသူတွေသူတို့ရဲ့အကြောင်းကိုလည်း အရမ်းရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဆီမှာပဲရင်ဖွင့်တတ်ကြတယ် အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လာရင် အရမ်းစဉ်းစားကြလွန်းလို့အများတကာက မာနကြီးတယ်လို့ အထင်ခံရတတ်တယ်သို့သော် သူတို့ဟာ ကိုယ်တကယ်ချစ်ရသူကို တိတ်တခိုးရှာဖွေတတ်ကြတယ် ပေးဆပ်ဖို့ ဝန်မလေးကြသလို ကိုလိုချင်တာကိုလည်းရအောင်ယူတတ်ကြသူတွေ သူငယ်ချင်း အပေါင်းသင်းရွေးရာမှာ စိတ်တူကိုယ်တူရွေးပေါင်းတတ်ကြလို့သူငယ်ချင်းနည်းပေမယ့် စစ်မှန်တဲ့ သူငယ်ချင်းမျိုး […]